minthantzaww: မကြာခဏ Locked ကျနေခြင်း
start ရဲ့ အပေါ်မှာ search programs and files ဆိုတဲ့အကွက် ရှိပါတယ်. အဲ့အကွက်မှာ (ပုံ-၁) ထဲကအတိုင်း power option ဆိုပြီးတော့ ရိုက်လိုက်ပါ. ပြီးတော့ အပေါ်ဆုံးမှာပေါ်နေတဲ့ power option ဆိုတဲ့ icon လေးကို နှိပ်လိုက်ပါ.
Run Box ခေါ်မရခြင်း.
အရင်ကလို Run ဆိုပြီးတော့ window7မှာ မပါတော့ပါဘူး. အဲ့ဒီ့အတွက် ခုနကလိုပဲ start ရဲ့ အပေါ်မှာ search programs and files ဆိုတဲ့အကွက် ရှိပါတယ်. အဲ့အကွက်မှာ run ဆိုပြီးတော့ ရိုက်လိုက်ပါ. Run ဆိုတဲ့ icon လေး အပေါ်ဆုံးမှာ ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်. အဲ့ icon လးကို နှိပ်လိုက် တာနဲ့ Run box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်.
နောက်တစ်နည်းကတော့ window key + r ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ Run box ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်. window key ဆိုတာကတော့ မသိရင် ctrl key နဲ့ Alt key ကြားထဲမှာ ရှိတဲ့ window icon ပုံလေးနဲ့ key ကိုခေါ်တာပါ. အဲ့ဒီ့ window key ကို အရင်နှိပ်ပြီးတာနဲ့ မလွှတ်ပဲနဲ့ r ကို နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်.